जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्यः नियमित व्यायाम, मासु होइन माछा ! - AJAMBARI
५ असार,२०७६022
१ फाल्गुन,२०७४0920
जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्यः नियमित व्यायाम, मासु होइन माछा !
५ फाल्गुन,२०७५ 135 0
संसारमा सबैभन्दा लामो आयु कुन देशका बासिन्दाको छ ?
जबाफ, जापान ।
यसको जवाफ भने एक वाक्यमा टुंगिदैन ।
खुलेर हाँस्नु– खुलेर हाँस्नु कुनै औषधीभन्दा कम होइन । उन्मुक्त हाँसो प्राकृतिक औषधी हो, जसले धेरै रोग लाग्न दिदैन । यसले डिप्रेसन र निरासाबाट मुक्ति मिल्छ । जब खुलेर हासिन्छ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । जापानीहरुको हाँस्ने बानी नै हो । हरेक दिन कम्तिमा १५ मिनेट खुलेर हाँस्नुपर्छ ।
अध्ययनहरुबाट के तथ्य बाहिर आएको छ भने, उन्मुक्त हाँस्दा ८ बर्ष भन्दा बढी थप उमेर बढ्छ ।
जापानी गरिरो निन्द्रा लिने अभ्यास गर्छन् । उनीहरु हरेक दिन कम्तिमा आठ घण्टा सुत्छन् ।अनलाईनखबरबाट
१ फाल्गुन,२०७४0566
७ फाल्गुन,२०७४0561
४ चैत्र,२०७४03356